Forex Flex ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex Flex ကို EA ၏Forex Flex ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် Forex Flex ကို EA ၏ 15
စျေးနှုန်း: $ 330 (၁ အစစ်အမှန် & အကန့်အသတ်မဲ့ Demo စာရင်းများ၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ထောက်ပံ့မှုများအတွက်အထူးလျှော့စျေး)
ငွေကြေးစွမ်း: မဆို (EURUSD, GBPUSD, GBPCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF နှင့် USDJPY စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း)
မှတ်ချက် - တင်းကျပ်စွာကန့်သတ်ချက်အလျှော့ - 67% OFF - COUPON CODE ကိုအသုံးပြုပါ။ FLEX67OFF
ရရှိနိုင် Forex Flex ကိုကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
- Forex Flex EA: 1 အစစ်အမှန်အကောင့်, Unlimited DEMO Accounts ကို, 12 ထူးခြားသောထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ, ပုံမှန်စျေးနှုန်း: $ 999
- Correlated Hedge EA + Forex Flex EA:2အစစ်အမှန် Accounts ကို, Unlimited DEMO Accounts ကို, ပုံမှန်စျေးနှုန်း: $ 1,500
UPDATE - ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအသစ် ၃ ခုထုတ်ပြန်သည်
Forex Flex EA သုံးသပ်ချက် - အဆင့်မြင့်ဆုံး FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
Forex Flex ကို EA ၏ လုံးဝအလိုအလျှောက်အလုပ်လုပ်သည်။ အဆိုပါကုန်သွယ် logic ယင်းကြောင့် Forex ကျွမ်းကျင်သူt အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် လာမယ့်2နေ့ရက်ကာလအဘို့အရှိဆုံးဖွယ်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွက်လိုအပ်အလို့ငှာဖွင့်လှစ်။ signal တွက်ချက်မှုညွှန်းကိန်းများနှင့်သင်္ချာအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ရလဒ်အတိုင်းဤ FX စနစ်အားပေးသည် အနိုင်ရအရောင်းအကျော် 90% ။
အဆိုပါ Forex Flex ကို EA ၏ "နှငျ့ပတျသကျအသစ်တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်ကို virtual အရောင်းအ"။ ရိုးရှင်းစွာအထား, ထိုကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးနောက်ခံကို virtual အရောင်းအဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ EA ၏အဆက်မပြတ်စုံလင်သော entry ကိုအမှတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် FX စျေးကွက်စောင့်ကြည့်။ ဤအချက်မှာ Forex စက်ရုပ် အမှန်တကယ်အရောင်းအဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူမျှမ automated စနစ်ကထွက်ရေရှည် updated setting များကိုမပါဘဲအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကထူးခြားတဲ့ Forex EA ၏ features တွေတစ်ခု အလိုအလျှောက် update ကိုစနစ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူလက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေများအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် setting နဲ့ရက်စွဲကိုမှတက်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပြီးသေချာစေနိုင်ပါတယ်။
အရေးအပါဆုံးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ် Forex Flex ကို EA ၏ install လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်စာသားအနေဖြင့်၎င်းကိုဇယားသို့ချိတ်ဆက်ထားခြင်း၊ drop-down list မှမဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ OK ကိုကလစ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
သင့်ထံမှအဘယ်အကျိုးကိုရနိုငျသညျ 12 selection ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, သတင်းနှင့်အချိန် filter များ, ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု Feature ကို နှင့် Active ကိုအဖွဲ့ဝင်များသာလျှင်ဖော်ရမ်။
ဤ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ထည့်သွင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင် parameters များကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်ပြproblemsနာမရှိဘဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Forex Flex ကို EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပြီးပါပြီ!
Forex Flex EA - FX Trading နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်မဟုတ်လော
၏အသုံးပြုမှုကို Make Forex Flex ကို EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
Forex Flex EA - Forex Trading စက်ရုပ်အကြောင်းမကြားဖူးဘူးလား။
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် Forex Flex ကို EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရှင်းစွာ FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်က၎င်း၏လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ Forex Flex ကို EA ၏ အမြတ်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အခါအပေါ်ကျန်ရှိနေခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5အမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခွင့်အလမ်းများနှင့်သပိတ်ရှာဖွေနေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ Forex Flex ကို EA ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Forex Flex EA - ဤအမြတ်အစွန်းဖြစ်သော FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များ
box ကို setting မှထွက်သွားဖို့အဆင်သင့်, ရိုးရှင်းစွာ plug and play ။ စာသားတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုဇယားတစ်ခုသို့ကပ်ခြင်း၊ drop-down စာရင်းတစ်ခုမှသင်အသုံးပြုလိုသောမဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ OK ကိုနှိပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည် EURUSD, GBPUSD, GBPCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF နှင့် USDJPY အားလုံးအတွက်ဒါပေမယ့်နီးပါးမဆိုဇယားအပေါ်ကုန်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ Setup လမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရန်အကြံပြုသောအတွဲအနည်းငယ်ရှိသည်။
SET ဖိုင်များကိုအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သည့်ရာနှင့်ချီသောထူးခြားသောဆက်တင်များကြောင့်မလွှမ်းမိုးပါစေနှင့် Forex Flex ကို EA ၏။ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့်အဆင့်မြင့် SET ဖိုင်များသည်တည်ဆောက်ထားသည့်ဗျူဟာများကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်မလိုပါ။ အသင်းသားများထံမှ SET ဖိုင်တစ်ခုကို Download လုပ်ပါ။ ၎င်းကို Flex (load - File -> Open ကိုနှိပ်ပါ) ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပြီးပြီးအောင်လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Forex Flex ကို EA ၏ ယခု SET file မှသင့်လျော်သော settings အားလုံးကို load လုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှအလွန်ကောင်းမွန်သော .set ဖိုင်များရှိရုံသာမကဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များမှဆွေးနွေးမှုများနှင့်အကူအညီများကိုဝေမျှပေးသည့်အလွန်အားကောင်းသောအဆိုတော်များလည်းရှိသည်။
စျေးကွက်တွင်တစ်ခုတည်းသော EA ကိုမပိတ်ထားသောကမ်းလှမ်းချက်ရှိသည် Active ကိုအဖွဲ့ဝင်များသာလျှင်ဖိုရမ် တစ်ယောက်ချင်းစီကိုမျှဝေရန်၊ ဆွေးနွေးရန်၊ အခြားမည်သည့် EA ရောင်းချသူမဆိုမိမိ၏ဖောက်သည်များအားဤကဲ့သို့သောအဖိုးတန်သောကိရိယာများကိုပေးအပ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိပါ။
Steve ကိုဒီသော့ချက်ဒြပ်စင်အဖြစ်ထားတော်မူ၏ Forex Flex ကို EA ၏ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာ developer ဖြစ်ရုံသာမကဘဲဖောက်သည်အထောက်အပံ့လည်းပါ။ သင်က EA လုပ်သူနှင့်အပြင်ကိုသိသူကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောလိမ့်မည်။ အခြေခံအားဖြင့်သာသိသောငှားရမ်းထားသောကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပါ။ သူကလူတိုင်းနှင့်သင်မြင်ရသောအင်္ဂါရပ်များစွာကိုပြန်လည်ဖြေကြားသည် Forex Flex ကို EA ၏ ယနေ့သုံးစွဲသူများတောင်းဆိုထားသောအင်္ဂါရပ်များသည်လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်ကဖြစ်သည်။
စျေးကွက်စောင့်ကြည့်မှုအသစ် Virtual Trade နည်းပညာ ဆောင်တတ်၏ တိကျသော entry ကိုအချက်များ အဘယ်သူမျှမညွှန်ပြချက်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်း။ ပုံသေသတ်မှတ်ချက်များသည်စျေးကွက်အခြေအနေများကိုစစ်ဆေးရန်ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုစီအတွက် virtual အရောင်းအ ၀ ယ် ၆ ခုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤနံပါတ်ကိုလျှော့ချခြင်းကတိကျသောဝင်ပေါက်အချက်များဖြစ်ပေါ်စေပြီးကုန်သွယ်မှုအကြိမ်ရေပိုမိုများပြားစေသည်။ ဒီနံပါတ်ကိုမြှောက်တာကဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်။ စျေးကွက်ပြောင်းသွားတဲ့အခါပြောင်းလဲမှုကိုအဆုံးသတ်ပေးတဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်ခဲ့ရင် Support Team ကလူတိုင်းကိုအလိုအလျောက် update လုပ်တဲ့အကြောင်းကြားစာတွေပေးပို့လိမ့်မယ်။
Forex Flex ကို EA ၏ ရုံစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်မည်သည့်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအကြောင်းကိုကုန်သွယ်မှုမှ setup ကိုနိုင်ပါတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးအသင်းဝင်အားလုံးပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ် 12 ထူးခြားတဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ မောက်စ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ကစားလို့ရတယ်။
Forex Flex EA - အဓိကလက္ခဏာများ
အကောင့်လက်ကျန်ငွေပေါ် မူတည်၍ အရွယ်အစားများများကြီးထွားလာသည်။
အားလုံးနှင့်ရှောင်ကြဉ်ပါ မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသတင်းဖြစ်ရပ်များ မိနစ် 'xx' အရေအတွက်အားဖြင့်။ အလွန်အမင်းပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်ပိတ်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်မီနှင့်နာရီမတိုင်မီ / ပြီးနောက်သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းသတင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
Equity ကို Trailing TP
အဓိကတစ်ခုမှာ၏အမြတ်အစွန်းနည်းလမ်းများယူပါ Forex Flex ကို EA ၏။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ pip အခြေခံသော TP မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်အတွဲတစ်ခုချင်းစီမှကုန်သွယ်မှုအားလုံး၏နောက်လိုက်များကို "တောင်း" တွင်ထည့်ပြီးနောက်တစ်ခုသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းသို့ရောက်ရှိသောအခါ၎င်း EquityTrailTP ကိုစတင်ရန်စတင်သည် အမြတ်အစွန်းသည်၎င်းသည် TP ကိုသော့ခတ်ပြီးသည်နှင့်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံသည့်အစောင့်အရှောက်ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့်သင်စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်းအတာများစွာပြုလုပ်နိုင်သည့်အလားအလာနှင့်အတူ၎င်းကိုစတင်ဖော်ထုတ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်ဤအင်္ဂါရပ်တစ်ခုတည်းကသူတို့ယူအမြတ်အစွန်းကိုထိန်းချုပ်ရှိသည်။
တစ် ဦး ကပျက်ကွက်လုံခြုံမှု, အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်အတွက်တစ် ဦး အချို့သော drawdown ရာခိုင်နှုန်းမှာကုန်သွယ်ရေးအားလုံးပိတ်ဖို့ရန်သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်မှတ်။
Session filter များ
သင် 24/5 ရောင်းလိုသည်၊ သို့မဟုတ်အာရှ၊ နယူးယောက်၊ လန်ဒန်စသည့်အစည်းအဝေးများကိုရှောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါ။
EMA လက်ဝါးကပ်တိုင်၊ TDI၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ Bollinger Bands၊ ADR၊ Stochastic, RSi, Candle အရွယ်အစား၊ ဤအညွှန်းများအားလုံးသည်သီးခြားလွတ်လပ်စွာဖွင့် / ပိတ်နိုင်ပြီးအလွန်အမင်းပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ညွှန်ပြချက်ပုံစံပေါ် မူတည်၍ ပိတ်ထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များသည် EMA လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်ပိတ်လိုပါသလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ RSi သည်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်သို့ရောက်သောအခါပိတ်ပါသလား။ ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ!
ပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ထားပေမယ့်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာ configuration options အများအပြားနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ပွဲစားများအားလုံးက hedging ကိုခွင့်မပြုသကဲ့သို့၎င်းကိုနည်းဗျူဟာ / SET ဖိုင်များစွာကအသုံးပြုသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည် Forex Flex ကို EA ၏ အဲဒါကိုလိုချင်သူများအတွက်။
သင်၏ Forex ပွဲစားကိုသင်မည်ကဲ့သို့ရောင်းသည်ကိုမသိစေလိုပါကဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုပါ။
ဒါကတိကျတဲ့ငွေကြေးရန်သင့်ရဲ့ထိတွေ့မှုကန့်သတ်လိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကုန်သွယ်နိုင်သည့်အများဆုံးဒေါ်လာဒေါ်လာအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်လိုချင်သည့်အတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကား၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ "အချို့" ဖြစ်ကြသည် Forex Flex ကို EA ၏ သင့်ကိုဒီမှာမြင်ကွင်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာသင့်လက်ချောင်းထိပ်ပေါ်ရောက်မယ့်အရာကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးဖို့။
Forex Flex EA Update - Correlated Hedge EA အသစ်ကိုထုတ်ပြန်သည်
စတိဗ်နဲ့သူ့ရဲ့ developer အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့ကြ ဆက်နွယ်နေကြောင်းခြံကို EA။ ဤ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး သစ်တစ်ခုဆက်စပ်ခြံနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်ရလဒ်များကိုပြသထားတယ်။
တဦးတည်း pair တစုံအရောင်းအဝယ်ဖြစ်, သင်၏အနေအထားစောငျရနျးဖို့အလားတူလမ်းအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးကြောင်းအခြား pair တစုံကိုသုံးနိုင်သည်။
တခုရဲ့ဥပမာ အပြုသဘောဆက်စပ်မှု AUDUSD နှင့် NZDUSD သူတို့များသောအားဖြင့်အတူတကွဆင်းတက်ရွှေ့နှင့်ဆိုလိုတာကဖြစ်ပါတယ်။
A အနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှု တစ်တသမတ်တည်းအခြေခံပေါ်မှာအချင်းချင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးသာဓက USDCHF နှင့် EURUSD ဖြစ်ပါတယ်။
အရာအားလုံးလုပ်ဖို့ built Forex Flex ကို EA ၏ ပြုပါ, ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကိုတစ်ဦးဆက်စပ်လမ်းအတွက်စောငျရနျးဖို့နှင့်အတူနိုင်ပါတယ် အတင်းအကြပ်ဒါမှမဟုတ် သဘာဝကျကျ.
အတင်းအကျပ် တစ်စုံအရောင်းအ၎င်း၏သတ်မှတ်ထားသောဆက်စပ်မိတ်ဖက် pair တစုံတစ်ချိန်တည်းမှာအဖြစ်ကောင်းစွာကုန်သွယ်မှုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေပါလိမ့်မည်ဆိုပါကဆိုလိုသည်။
သဘာဝကျကျ နှစ်ဦးစလုံးသည်သဘာဝ၎င်းတို့၏ entry ကိုမှတ် hit မဟုတ်လျှင်နှစ်ခုဆက်စပ်မိတ်ဖက်အားလုံးအတူတကွကုန်သွယ်မှုမပြုစေခြင်းငှါဆိုလိုသည်။ တဦးတည်းကသူ့ဟာသူကုန်သွယ်မှုမယ်လို့ဆိုလိုသောအခြားမပါဘဲဝင်တိုက်နိုင်ပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေကဒီမှာအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျမူလမဟာဗျူဟာများမဆိုနဲ့တူကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင် setting များကိုသုံးစွဲဖို့ကသတ်မှတ်နိုင်သည်။
Forex Flex EA - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
Forex Flex ကို EA ၏ အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါ Forex စက်ရုပ် အားလုံးငွေကြေးအားလုံးအပေါ်ကုန်သွယ်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးသည် micro (ရာခိုင်နှုန်း) အကောင့်ပေါ်တွင်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် nano အကောင့်ပေါ် $ 100, ဒါမှမဟုတ် $ 500 ၏နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် Forex Flex ကို EA ၏ ဒီကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 90% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: 30 နေ့ကပိုက်ဆံပြန်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ရလဒ်များအထောက်အထားနဲ့အတူအာမခံပါသည်။
Forex Flex ကို EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 330 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင် Forex Flex ကို EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု Feature ကို
MT4 သဟဇာတ 600 + Build
သတင်းနှင့်အချိန် filter များ
NFA နှင့် FIFO သဟဇာတ
Forex Flex ကို EA - ဒီနည်းကို FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်ကို Install လုပ်နည်း - SETTINGS လမ်းညွှန်! , မှန်ကန်စွာ setup ကို Forex Flex ကို EA ၏ဖို့အောက်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ Installer TIMEFRAME: H1 သို့မဟုတ် H4 ထဲမှာ built မဟာဗျူဟာများမဆိုဘို့ကောင်းပါတယ်။ သင် .set optimized ဖိုင်များကိုမဆိုအသုံးပြုနေလျှင်, အချိန်အပိုင်းအခြားများသောအားဖြင့်ဖိုင်၏နာမ၌တံဆိပ်ကပ်နေသည်။ ငွေကြေးစနစ်စွမ်း: သင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြန့်ပွားနှင့်အတူမည်သည့်မဟုတ်သောထူးခြားဆန်းပြား curreny အားလုံးအတွက်အကြောင်းကိုပဲရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။ GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, NZDUSD မလုပျ TRADE ကို: EURNZD, GBPJPY, EURAUD ဤသည်အကောင်းဆုံးအဆိုတော်ပါပြီ... ဆက္ဖတ္ရန္
ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်များ, ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်တနင်္လာသြဂုတ်လ 24, 2015 အပေါ်ကြုံခဲ့ရသောမကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များ၏ကောင်းစွာသတိပြုမိနေသေချာပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုန်သည်များများအတွက်ဆိုးနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Forex Flex ကို EA ၏အသုံးပြုသူအများဆုံးအတော်လေးငြိမ်ဝပ်ကနေတဆင့်လုပ်ပုံရသည်, သို့သော်ငါသည်သင်တို့ကိုအနည်းငယ်မကိုငါသိ၏။ ကျနော်တို့ Forex Flex ကို EA ၏များ၏ v3.0 လွှတ်ပေးရန်အနာဂတ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များဆန့်ကျင်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကမ်းလှမ်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ အများဆုံးဒုက္ခအားလုံး EURAUD, EURCAD, EURNZD နှင့် USDJPY ခဲ့ကြသည်။ ဤအမရေမရာနှင့်မတည်ငြိမ်သောကြိမ်စဉ်အတွင်းကျနော်တို့ကိုသူတို့အဖြစ်ရှိသူများပထမဦးဆုံး3အားလုံးအတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရှောင်ရှားရန်အကြံပေးလို... ဆက္ဖတ္ရန္
သူချင်း Forex ကုန်သည်များချစ်ခင်ရပါသော, Forex Flex ကို EA ၏၏ဗားရှင်း 3.20 သင် login နှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ရာယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ အပြောင်းအလဲများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။ သင်ရုံအောက်ကအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်သည့် .ex4 အစားထိုးရန်ပုံကိုသိမထားဘူးဆိုရင်။ သငျသညျပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရှိပါကသင်သည်သင်၏ MT4 တံခါးပိတ်နေစဉ်ရုံ Forex-Flex ကို-EA.ex4 အစားထိုးသေချာအောင်မရှိကိစ္စများရှိသင့်ပါတယ်။ သင်တို့အင်္ဂါစာမျက်နှာကနေ .zip ဖိုင်တစ်ခုလတ်ဆတ်တဲ့မိတ္တူ Download ပြုလုပ် extract လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ MT4 ကိုဖွင့်ပြီး File ကိုသွား -> Open ကိုဒေတာများ Folder ကိုပိတ် MT4 terminal ကိုသင် MQL4Experts ဖိုင်တွဲများနှင့်မိတ္တူဖို့ .ex4 Go ကိုအစားထိုးဖို့စဉ် / အစားထိုးရန်... ဆက္ဖတ္ရန္
အထူး LIMITED လျှော့ - 75% OFF နာရီအနည်းငယ်ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်များအဆုံးသတ်, Forex Flex ကို EA ၏ Metatrader4(MT4) ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအတွက်အလွန်အမြတ်အစွန်းကျွမ်းကျင်သူ Advsior ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bestforexeas.com/forex-flex-ea-review/ Forex Flex ကို EA ၏ "ကို virtual အရောင်းအ" နှငျ့ပတျသကျအသစ်တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ရိုးရှင်းစွာအထား, ထို Forex Flex ကို EA ၏အဆက်မပြတ် Flex ကိုမှန်ကန်အရောင်းအဖွင့်စတင်ပါလိမ့်မည်သည့်အချက်မှာအကြွင်းမဲ့အာဏာစုံလင်သော entry ကိုအမှတ်, ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီရန်စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ဖို့သူတို့ကိုသုံးပြီးနောက်ခံကို virtual အရောင်းအဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ Forex Flex ကို EA ၏လစဉ်% 12 အထိအမြတ်အစွန်းနှင့်အတူ 150 ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကမ်းလှမ်း! မဟာဗျူဟာ: - ပုံမှန် - ဤဖြစ်ပါသည်... ဆက္ဖတ္ရန္
Forex Flex ကို EA UPDATE - NEW double အထူး LIMITED လျှော့ထုတ်ပြန်ခဲ့သော TDISR မဟာဗျူဟာရှေ့ကနေ - 75% OFF နာရီအနည်းငယ်ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်များ, သစ်အဆုံးသတ်! Forex Flex ကို EA UPDATE - NEW double ဤတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော TDISR မဟာဗျူဟာနှင့်အတူလှည့်ပတ်ကစားရန်သစ်တစ်ခု Forex Flex ကို EA ၏နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်ရှေ့ကနေ။ အစောပိုင်းရလာဒ်များပင်အချို့အန္တရာယ်များအားလုံးသုံးပြီးမြင့်မားသောပြန်လာပြီးနှင့်အနိမ့် DD နှင့်အတူအလားအလာကြည့်ရှုပါ။ TDI align ရန်အဘို့အဒါဟာစောင့်အဖြစ်အဆိုပါ TDI ဆင်ခြေလျှောတသမတ်တည်းတူညီဦးတည်ရွေ့လျားခံရဖို့။ ထိုအခါကကုန်သွယ်မှုပါလိမ့်မယ်တစ်ဦး SR ဇုန်၏ 15 pips အတွင်းမဟုတ်ဘူးယူဆ။ နှစ်ဆ... ဆက္ဖတ္ရန္
Forex Flex ကို EA UPDATE - သစ်ဆက်စပ်မှုခြံမဟာဗျူဟာထုတ်ပြန်ခဲ့သော performance UPDATE: + 77.8% MONTHLY Return (အစစ်အမှန် TRADING!) အထူး LIMITED လျှော့ - OFF နာရီအနည်းငယ်ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်များ, သစ်အဆုံးသတ် 67%! Forex Flex ကို EA UPDATE - စတိဗ်နှင့်သူ၏ Forex Flex ကို EA ၏ developer အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏ဆက်စပ်မှုခြံ EA ၏နောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့ကြ https://www.bestforexeas.com/forex-flex-ea-review/ ထုတ်ပြန်ခဲ့သောသစ်ဆက်စပ်မှုခြံ Strategy ။ ဤသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသစ်တစ်ခုဆက်စပ်ခြံနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်ရလဒ်များကိုပြသထားတယ်။ ဆက်စပ်ခြံကဘာလဲ? တဦးတည်း pair တစုံအရောင်းအဝယ်ဖြစ်, သင်၏အနေအထားစောငျရနျးဖို့အလားတူလမ်းအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးကြောင်းအခြား pair တစုံကိုသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာတခု... ဆက္ဖတ္ရန္
Forex Flex ကို EA UPDATE - Fantastic ဆက်စပ်မှုစောင်ရန်းကို EA ၏တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု performance UPDATE: + 50.1% MONTHLY Return (အစစ်အမှန် ACCOUNT ကို TRADING!) အထူး LIMITED လျှော့ - OFF နာရီအနည်းငယ်ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်များ, သစ်အဆုံးသတ် 67%! Forex Flex ကို EA UPDATE - Fantastic ဆက်စပ်မှုစောင်ရန်းကို EA ၏တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု https://www.bestforexeas.com/forex-flex-ea-review/ စတိဗ်နှင့်သူ၏ Forex Flex ကို EA ၏ developer အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏ဆက်စပ်မှုခြံကို EA မှအချို့သောတိုးတက်မှုစေပြီ။ ဤသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသစ်တစ်ခုဆက်စပ်ခြံနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်ရလဒ်များကိုပြသထားတယ်။ ဤတွင်မျှမျှတတကောင်းစွာလုပ်နေခဲ့တာကိုအကောင့်တစ်ခုဖွင့်, set ဖိုင် Forex Flex ကို EA ၏အဖွဲ့ဝင်ဧရိယာများတွင်ပါဝင်သည်... ဆက္ဖတ္ရန္
Forex Flex ကို EA UPDATE - အဓိကသတင်းအပတ်ဒီဇင်ဘာ 12TH - 15TH, 2017 performance UPDATE: + 73.8% MONTHLY Return (အစစ်အမှန် TRADING ACCOUNT ကို) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတိပေးချက်: ဗိုလ်မှူးသတင်းရက်သတ္တပတ် (ဒီဇင်ဘာ 11th - 15th) ကဒီမှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ: https: //www.myfxbook.com/forex-economic-calendar ထောက်ခံချက်: ဒီရက်သတ္တပတ်ကုန်သွယ်မှုမ !! skip ဖို့တစ်ပါတ်အစဉ်အဆက်လည်းမရှိလျှင်ဤဖြစ်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နီးပါးဆက်ဆက်ကြီးမားသော spikes နှင့်အတူအစွန်းရောက်မတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ့်ကြောင်းအခြေခံအားဖြင့်တိုင်းငွေကြေးအနှံ့အဓိကသတင်းဖြစ်ရပ်များယခုအပတ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်တစ်ချိန်တည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဤတူညီသောသတင်းဖြစ်ရပ်များတွေအများကြီးနဲ့အတူဒုက္ခတွေအများကြီးစေ၏။ ငါပြီးသားပြီ... ဆက္ဖတ္ရန္
Forex Flex ကို EA - METATRADER4performance UPDATE FOR အဆင့်မြင့် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး: + 37.7% MONTHLY Return (! အစစ်အမှန်ငွေ ACCOUNT ကို) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, ကို update! Forex Flex ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Metatrader4သည်ဆုံးသောအဆင့်မြင့် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး (MT4) ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/forex-flex-ea-review/ Forex Flex ကို EA ၏လုံးဝအလိုအလျှောက်အလုပ်လုပ်သည်။ အဆိုပါကုန်သွယ် logic တဲ့ Expert အကြံပေးလာမည့်2နေ့ရက်ကာလအဘို့အရှိဆုံးဖွယ်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွက်လိုအပ်အလို့ငှာဖွင့်လှစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ signal တွက်ချက်မှုညွှန်းကိန်းများနှင့်သင်္ချာအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ရလဒ်အတိုင်းဤ FX စနစ်ကအနိုင်ရအရောင်းအကျော် 90% ကိုပေးတော်မူ၏။ အဆိုပါ Forex Flex ကို EA ၏အသုံးပြုမှု... ဆက္ဖတ္ရန္
ဟဲလိုဈသူအလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် backtest ယူနိုင်ပါသည်
မှ Reply အီဘရာဟင်
အီဘရာဟင်မင်္ဂလာပါ Forex Flex ကို EA ၏၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားများ